Brazil oo barbare lagu celiyay - BBC Somali
18 Juunyo 2014
Xulka waddanka Brazil ayaanan ku soo bandhigin garoonka Estadio Castelao, ciyaar lagu qanco, kaddib markii ay kooxda Mexico ku celisay barbaro ebar iyo ebar ah, waxaana ciyaarta aad uga dhex muuqday goolhayaha Mexico ee Guillermo Ochoa.
Kooxda tababare Luiz Felipe Scolari, ayaanan soo bandhigin ciyaartii laga filayay markii ay magaalada Fortaleza kula dheeleen xulka Mexico.
Weeraryahan Neymar iyo kabtanka Thiago Silva ayaa helay fursadihii Brazil ee ugu wanaagsanaa intii ay socotay ciyaarta balse waxaa taasi diiday goolhaye Ochoa.
Goolhayaha ayaa badbaadiyay lix fursadood oo gool loo fishay, mana jiro goolhaye ka dheelay ciyaarahan adduunka oo sidaa oo kale u dheelay markii laga reebo ciyaaryahanka goosha ugu jira xulka qaranka Aljeeriya oo isna lix fursadood ka badbaadiyay xulka Belgium-ka oo ay xalay wada dheeleen.
Mexico ayaanan difaac kaliya ku ekaan ee dhowr jeer ayey tijaabiyeen goolhayaha Brazil, Julio Cesar, oo fursadii ugu fiicneyd waxaa helay ciyaaryahanka badalka ku soo galay ee Raul Jiminez.
Natiijada ciyaarta ayaa labada kooxba waxa ay ka dhigtay in ay heli karaan fursad ay ku hogaamiyaan kooxaha ku jira Group A-da.
Brazil ayaa 26-kii ciyaar ee ugu dambeyay ee ay dheesho koobka adduunka waxa ay barbaro ebar iyo ebar ah gashay 2 kulan oo kaliya.
Saddexdii ciyaar ee midan ka horreysay ee ay la yeelatay Mexico-na Brazil waxa ay ku badisay 11 gool.
Brazil ayaa ciyaarta ugu dambeysa guruubka waxa ay magaalada Brasilia kula dheeli doontaa xulka Cameroon, haddii ay halkaa dhibic ka helaana waxa ay u soo gudbi doonaan wareega labaad ee tartanka.